Mamorona paleta miloko amin'ny sary ao amin'ny ColorFavs | Famoronana an-tserasera
Matetika isika mahita anay fitaovana web vaovao tena tsara ho an'ny loharanom-pikarohana asa iray ho an'ny oniversite toy ny fontfling, na Lamina halftone hamoronana ireo lamina izay sarotra kokoa indraindray noho ny tena izy.
Androany izahay dia afaka mandray anao amin'ny alàlan'ny antsoina hoe ColorFav vaovao izay fitaovana iray karakarainy miteraka palety miloko tsara tarehy ny sary, ny URL na ny fidirana an-tsokosoko atolotray.
Ity fitaovana web ity dia noforonin'i Deron Sizemore, mpamorona tranonkala iray izay nanokana azy ireo tamin'ny fotoana malalaka mba hahafahany mandefa ity tranonkala ity ka na iza na iza dia afaka mamorona paleta miloko tsara tarehy, mitovy amin'ireo natomboka rehefa mampakatra asa famoronana ao amin'ny tranokala Dribbble ny iray.
ColorFavs dia afaka mamorona paleta miloko mora foana mitaritarika sy mandatsaka sary, manorata URL na misafidiana andiana sanda tsy misy dikany tanteraka. Azonao atao koa ny mankafy ireo paleta miloko tianao, mijery loko mifameno, ary mamorona fanangonana anao manokana. Fitaovana miasa tanteraka, mora ampiasaina ary mora ampiasaina.
Ity tranonkala ity dia noforonina tamin'ny alàlan'ny rafitra Django miaraka amin'ny Fiteny fandaharana Python. Marihina fa ny mpikambana misoratra anarana dia afaka miditra amina andian-safidy toa ny hoe afaka mankafy paleta ary koa mamorona fanangonana azy manokana.
Ao amin'ny pejy antsipirian'ny loko tsirairay dia ho hitanao fampahalalana amin'ny antsipiriany raha afaka misafidy amin'ny fiovan'ny loko efatra ianao: RGB, HSL, CMYK ary Websafe. Safidy iray hafa dia gradiante 10 maivana sy maizina mifototra amin'ny loko voalohany.
Manana ny tranonkala ianao hatrizay Ity rohy ity y aza mila fotoana maharitra hijanonana ho azy hijerena ny asa tsara ananan'ity mpamorona ity miaraka amin'ny fitaovana avo lenta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » ColorFavs dia fitaovana web vaovao hamoronana paleta miloko amin'ny sary